IBC ပြပွဲနေ့3ထုပ်ပိုးခြင်း! #IBCShow | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » IBC ပြရန်နေ့3အသုတ်စုံ! #IBCShow
IBC ပြရန်နေ့3အသုတ်စုံ! #IBCShow
အဆိုပါ IBC 2015 ပြရန်၏နေ့ THREE! သုံးချသွားနှစ်ခု! ထိုသူတို့ကယနေ့အဘို့အကောင်းဆုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏, တနင်္ဂနွေအမြဲတမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖန်တီးမှုများ "မြည်းကြိုးကိုဖြည်ဆွဲထား" နှင့်သူတို့နောက်ကျောအပေါ်ကိုင်ထားခဲ့ကြရတယ် ... ယနေ့အဘယ်သူမျှမပြတ်လပ်ခဲ့ပိုပြီးလျှို့ဝှက်ချက်များနှင့်အချက်ကတော့တာတွေနဲ့မြည်းကြိုးကိုဖြည်ပါစေနိုင်ပါတယ်သောနေ့ပါ!
အလယ်ပိုင်း 80 ရဲ့, Access အဆိုပါအဆင့်မြင့်အိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများမှာသူ့ဟာသူအမည်ကိုအောင်ထားပြီးကတည်းကနှင့် ဆော့ဖျဝဲနည်းပညာများလယ်ကွင်း။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့မှာကြည့်တယ် access ကိုကြိုး - ဝန်ကြီးချုပ်ကမီဒီယာများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက် multiscreen ။ နယူး apps များနှင့် Android, iOS, Mac, Window နဲ့ Windows Phone မှတဆင့်အသုံးဝင်သော features ယခုရရှိနေပြီဖြစ်သည်!
Aspera အချို့ထိပ်တန်းထစ်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်အတူယခုနှစ် IBC2015 မှာဒီစပါးရိတ်ရာကာလရာသီဟာသူတို့ရဲ့ display ကို gracing ဖြစ်ပါတယ်။ အတွက်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်ရုံကဤအလွထုတ်ကုန်များ၏တဦးတည်းအသီးအနှံကိုရိတ်ရလိမ့်မယ်။ အမြင့်မြန်နှုန်းလွှဲပြောင်းပလက်ဖောင်းများ၏အမျိုးအစားမှာတော့သူတို့ FASP 3.6 Core ပို့ဆောင်ရေး, နယူး Watchfolder ဝန်ဆောင်မှု, AutoScale, FASPStream API ကို, နှင့်နယူး ASCP4 အတူ Cluster Manager ကရှိသည်။ Aspera ကိုလည်း Aspera ရေးသားသူကွန်ယက်နှင့် SDK ကိုများကဲ့သို့အပိုဆောင်းဒဏ်ငွေထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်။ သူတို့ကအစသူတို့ကဒီရာသီပြနေကြသည်5apps များရှိသည်။ On Demand ကို Aspera, Aspera Analytics မှနှင့် Aspera Files: သူတို့ကဤနေရာတွင်ဤမျှလောက်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ပစ္စည်းပစ္စယရှိသည်, ပင်မိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့၎င်း၏ Goodies နှင့်အတူကျပ်လျက်ရှိသည်။
Contentwise န်ဆောင်မှု Multi-screen ကိုလစာတီဗီနဲ့တူသောအရာတို့ကိုတဆင့်ဝယ်လိုအားအကြောင်းအရာအပေါ်တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်မှုတွေကနေ OTT နှင့် streaming များန်ဆောင်မှုများအထိအတူအားလုံးကိုယ်ပိုင်မီဒီယာအကြောင်းပါ။ metadata Automation သူတို့ထိထိရောက်ရောက်အလုပ်အမှုကိုပြုရနျလိုအပျထိပ်ထစ် tools များနှင့်အတူအကြောင်းအရာမန်နေဂျာများကိုကူညီပေးသည်။ အဆိုပါ UX ကို Engine ကိုသူတို့ကနေမျှော်လင့်ထားရန်လာသည့်ထူးခြားသောကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအရာခြယ်လှယ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေးကူညီပေးသည် Contentwiseပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအယ်ဒီတာအဖွဲ့ကိရိယာများနှင့် analytics နှင့်အတူ
ကြောင်းမှာကောင်းသောရှေးရှေးကတော့ကြော့ဖြေရှင်းချက် perusing အပြင် Ericsson က မီဒီယာမှာသူတို့ရဲ့မိတ်ဖက်, မိတ်ဆွေများနှင့် client များအတွက်ရရှိနိုင်ရှိသည်, စက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ရုံဉီးဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်လိုင်းကို5(Viacom) ဖြင့်လုပ်သော5နှစ်စာချုပ်နှင့်အတူပြံ့နှံ့ဖြစ်ပါတယ်။ Thorsten Sauer, အသံလွှင့်မှာဌာနမှူး Ericsson ကဒီနေ့ကသူတို့တဲမှာပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
Exterity အဓိကသူတို့ရဲ့ဆန်းသစ်ဥစ္စာပြခဲ့သည်။ နေရာတိုင်းတီဗီ၏ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာကိုထောက်ခံသူများက မော်ဒယ် / ဒဿန, Exterity ပိုပြီးပြည့်စုံဆက်သွယ်မှုမှတဆင့်၎င်းတို့၏ client များအတွက်ချောမွေ့ရွက်အောင်ကျွမ်းကျင်စွာထွင်းထုဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကနေတစ်ဆင့်ကြောင့်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Exterity ရဲ့ High-grade ကိုဖြေရှင်းချက်၏အရည်အသွေးကိုအလွယ်တကူသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ထင်ပေါ်ကျော်ကြားနေဖြင့်သတိပြုနိုင်ပါတယ်။ တီဗီကွန်ယက် ABC ရုပ်သံနှင့်ဖီးနစ်တီဗီဘေဂျင်းသငျသညျသူတို့တစ်တွေတင်းကျပ်စွာသင်္ဘောကို run ရမယ်ကိုသိသင်္ဘောပြီးသားဖြစ်ကြပါလျှင်။ Ahoy!
Janet ကဒီအသျှင်ကုမ္ပဏီ၏တဲမှာ peek ရဖို့ယနေ့ GatesAir ဖွငျ့နေပြီ။ ၎င်းတို့၏ခါးပတ်အောက်မှအသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများနီးပါးရာစုနှစ်တစ်ခုနှင့်အတူ, သငျသညျသူတို့လုပ်နေလုပ်နေအရာကိုသိစိတ်ချပါနိုင်ပါတယ်နှင့်ကောင်းစွာကလုပ်နေတာ။ ဆန်းသစ်သောဒီဇိုင်းအတွက်တစ်ဦးကခေါင်းဆောင်, GatesAir နှစ်ဦးစလုံးတီဗီနှင့်ရေဒီယိုအဘို့, စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့အများဆုံးစစ်ဆင်ရေးအကျိုးရှိစွာက transmitter အချို့ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။
Genelec ၏ Lars-Olof Janflod ကုမ္ပဏီ၏ရေရှည်တည်တံ့သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. စိတ်လှုပ်ရှားလျက်ရှိ၏ ပြီးသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦး, သူတို့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ်သူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းများသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ Genelec, တက်ကြွစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအသံချဲ့စက်အတွက်ဘား-အဘယ်သူအားမျှခေါင်းဆောင်, သူတို့ရဲ့အာရုံကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် 3D များအတွက်အသံ၏လယ်ပြင်သို့အောင်ပွဲခံ entry ကိုအောင်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသုံးချသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထူးခြားတဲ့မော်ဒယ် 8351 တွေ့ကြုံခံစား, သူတို့သည် 3D အသံဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏င့်အခြားထိုးဖောက်အချို့ကိုထုတ်စစ်ဆေးပါ။
Genius ဒစ်ဂျစ်တယ်စားသုံးသူသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန် Genius ဒစ်ဂျစ်တယ်ရဲ့ဝိပဿနာပလက်ဖောင်း၏အစစ်အမှန်ကမ္ဘာက applications များဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (ထိုသူတို့အကြားသန်း 1 ကျော် subscribers တွေနဲ့) လေးဆင့်-8 အော်ပရေတာဖောက်သည် Genius ဒစ်ဂျစ်တယ်ကူညီပေးနေနေကြသည်သူတို့၏ကော်ပိုရေးရှင်း၎င်းတို့၏စုပေါင်းရည်မှန်းချက်များအချို့အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးခဲ့တယ်သောထုတ်ကုန်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ကြော်ငြာ, personalization, retention ကိုနှင့်ဝယ်ယူ: ဤဧည့်သည်အော်ပရေတာကဲ့သို့သောအရေးပါသောအအဖြစ်အကြောင်းအရာများဖုံးလွှမ်းကြ၏။
Piksel '' Televisionaries 'နှင့်သောအခါအသင်သည်သူတို့၏အချို့ကိုကြည့်ယူအဖြစ်သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအသင်းဖော်ထုတ် အောင်မြင်မှုများကိုသင်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Piksel ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်း, Piksel mosaic, Voyages နှင့် Piksel MCN သို့: သူတို့ဟာကဲ့သို့သောဖြေရှင်းချက်တပ်ဆင်ထားသည့်အထင်ကြီးစရာကုန်ပစ္စည်းလိုင်းရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို၏တခုလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ Piksel လည်းအခြားမီဒီယာဆိုင်များတွင်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရူပါရုံနားလည်သဘောပေါက်ကူညီပေးသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအတွက်င်အများအပြားသြဇာအမေရိကန်နှင့်ဥရောပကုမ္ပဏီများသည်
Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ (SAM) သူတို့ရဲ့နာမည်အသစ်နှင့်အတူသွားကြဖို့ IBC 2015 မှာအသစ်တခုတဲ, အမှတ်တံဆိပ်ရှိပြီး, ရူပါရုံကို။ နေရာတိုင်းမှာတီဗီ, တိုက်ရိုက်တီဗီနှင့်သတင်း & အားကစား: သူတို့ဟာကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်တစ်ခုအကွာအဝေးပါရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ရဲရင့်သစ်ကိုရူပါရုံကိုသယ်ဆောင်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ထုတ်ကုန် suite ကိုအတူ, သူတို့မီဒီယာမှာသူတို့ရဲ့အမှတ်အသားလုပ်သေချာပါသည်။
ဘက်မလိုက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းစံချိန်စံညွှန်းများအုပ်စုတစ်စုသည် UPnP ဖိုရမ်တစ်လောကလုံးဆက်သွယ်မှုများအတွက်လမ်းကိုပြင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ တထောင်ကျော်အဖွဲ့ဝင်ကုမ္ပဏီများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ, ဤအုပ်စုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှု၏ရည်မှန်းချက်ရှေ့ဆက်ဖို့ device ကိုလိုက်ဖက်မှုလွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းနှင့်ဖွင့်အပေါ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖိုရမ်ကိုမိုဃ်းတိမ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုသို့အသစ်သောနည်းပညာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ application များနှင့်ပေါင်းစည်းမှုကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
Vislink ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ, ပြင်ပမှာထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုအကြောင်းအရာအတွက်ကမ္ဘာကခေါင်းဆောင်, သူတို့ရဲ့ယူဆောင် ပြပွဲမှလျှောက်တွင်ကမကထပြိုင်ကားကားတစ်စီး။ Janet အော်တိုပြပွဲစတိုင် ala ကင်မရာအဘို့အခှဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ။ ဆယ်လူလာထုတ်လွှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ, ကြိုးမဲ့ကင်မရာစနစ်တွေ, ဂြိုဟ်တု ဂီယာ, မိုက်ခရိုဝေ့ရေဒီယို - ဟုတ်တယ်, Vislink သမျှသောမ, ဒါကြောင့်ငါသင်သည်သူတို့၏တဲကူးအပေါ်ပွေးအလှားသှားရငျးနဲ့ check လုပ်ထားထွက်မီဒီယာဖြေရှင်းချက်သူတို့ရဲ့အထင်ကြီးစုဆောင်းခြင်းမျှော်လင့်ပါတယ်။
နှင့် Facilis ဒီနည်းကိုပြောတာပေါ့:
အဆိုပါ IBC ဆုပေးပွဲယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်အတူနီးပါးတစ်ဦးနီးကပ်ဖို့ IBC ပြရန် 2015 နှင့်တကွ, ငါကကြှနျုပျတို့သညျဤဖိုရမ်အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုကြေညာသောအခြိနျကာလရဲ့ခံစား!
ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ
Wowza လွှအင်ဂျင် (Wowza မီဒီယာစနစ်များ) (ရွေးချယ်မှု-အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း)
ယင်းနှင့်အတူစီးဆင်းအကြောင်းအရာသိမ်းဆည်းထားပါ Wowza လွှအင်ဂျင် - ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့န်ထမ်းသင့်ရဲ့ပျမ်းမျှအားအသစ်သောပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်ထက်အကြောင်းအရာအတွက်ထုတ်လုပ်သို့ပိုပြီးစွမ်းအင်ထားရန်ခွင့်ပြုသုံးစွဲဖို့ဒါရိုးရှင်းတဲ့တစ်စိတ်ကြိုက်မီဒီယာဆာဗာကိုဆော့ဖ်ဝဲစနစ်။ အဆိုပါ Wowza လွှအင်ဂျင် မီဒီယာများအတွက်အစဉ်အဆက်ကိုတိုးမြှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကိုကူညီပျေါထှနျးခဲ့သညျ။ တစ်ဦးတတ်နိုင်စျေးနှုန်းမှာထိပ်တန်းအရည်အသွေးသည်။
အထူးများ (Vimond) (ရွေးချယ်မှု-အကြောင်းအရာ Delivery)
တိုင်းမေးခွန်းတစ်ခုကိုတစ်နေရာရာမှာအဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်။ နှင့် အထူးများ, Vimond ကဗီဒီယိုလုပ်ငန်းအသွားအလာများအတွက်အဖြေကိုရှိပါတယ်။ တစ်ဦးက ထိပ်တန်းထစ်တတိယပါတီဆော့ဖ်ဝဲဂရုတစိုက်စုဝေးစုဆောင်းခြင်းချောချောမွေ့မွေ့ရှိဖို့ဒီကနေသတင်းအချက်အလက်နှင့် files တွေကိုရွှေ့ဖို့ပေါင်းစည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချောမွေ့တဲ့နဲ့တန်ခိုးကြီးသောလုပ်ငန်းအသွားအလာကနေတဆင့်ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ feed ကို manipulate ။ installation စတင်ထံမှ finish ကိုတစ်ဒင်္ဂပါပဲ။ အသစ်ကုန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး: ကဟုခေါ်သည် အထူးများ.
Lyric64 (ChyronHego) (ရွေးချယ်မှု-အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး)
ယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်ကနေအထူးတစ်ခုခုများလွှတ်ပေးရန်ကိုမြင်လျှင် ChyronHego။ သင်သီချင်းစာသားဖြေရှင်းချက်ကြိုက်တယ်လျှင်သင်ကိုချစ်တာပေါ့ သီချင်းစာသား 64! သီချင်းစာသား 64 အရင်ကဲ့သို့အားလုံးအတူတူပင်ကြီးမြတ် features တွေရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အခုကပိုမြန်မယ့်နှင့်၎င်း၏အပြည့်အဝနဲ့ရက်ရက်ရောရော feature ကိုထားနှင့်သင်၏လုပ်ငန်းအသွားအလာလာအောင်ကူညီပေးပါတစ်ပြိုင်နက်ပိုကြီးတဲ့ဖိုင်တွေ juggle နိုင်ပါတယ်။ လာမယ့်မျိုးဆက်အဘို့အ၎င်း၏သီချင်းစာသား!
RX-4 (iZotope) (တီထွင်ဖန်တီး-အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း)
အစစ်အမှန်ကမ်ဘာပျေါတှငျသံကိုအမြဲမစုံလဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရောက်နေသည့်အခါငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်သျောအစစ်အမှန်များအတွက်အခြေချသင့်တယ် စံအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း? အဆိုပါ iZotope ရဲ့နဲ့အတူ RX-4 သငျသညျစုံလင်သောအသံများကိုတည်ဆောက်နိုင်, နောက်ခံဆူညံသံမှထွက်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်နှင့်ကွာဟချက်, ပျက်ယွင်းခြင်း, ရှေ့နောက်မညီထွက်လွယ်ကူချောမွေ့။ မဟုတ်ရင်အသုံးမပြုနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါပေး Audio အလားအလာဟာတွေနဲ့ပြုပြင်ကြရနိုင် RX-4 ။ မြန်ဆန်ချောမွေ့နှင့်စပ်ရာမရှိသောထိုထက်ပိုကောင်းနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ RX-4 အဆိုပါဖြစ်ပါသည် RX-4Advanced ။
CloudPVR ဖြေရှင်းချက် (Broadpeak) (တီထွင်ဖန်တီး-အကြောင်းအရာ Delivery)
သင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးမှာတက်ကြည့်အဖြစ်အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းကိုနေ့ခင်းအိပ်မက်သလား? စောင့်ဆိုင်း! ဒါပဲ! မိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်နေရာတိုင်းသင့်ရဲ့ content တွေကိုမကယ်မလွှတ်! Broadpeak'' s ကို CloudPVR ဖြေရှင်းချက် သငျသညျနေရာတိုင်းလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တီဗီပျံ့နှံ့ကူညီပေးသည်! ယင်းနှင့်အတူ (သင့်အကြောင်းအရာနှင့်အတူ) သင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမိုဃ်းတိမ်မှတဆင့်ပျံဝဲကြစို့ CloudPVR ဖြေရှင်းချက်.
လေ့လာသူ OTT (Volicon) (တီထွင်ဖန်တီး-အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး)
သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ဝေးကွာထက်မဖြစ်ပါသည် လေ့လာသူ OTT ။ တုံး သင့်ရဲ့ Multi-Platform ကိုမီဒီယာလိုအပ်ချက်များအတွက်အကြောင်းအရာချောမွေ့စွာ streaming စဉ်နှင့်သင့် OTT န်ဆောင်မှုများစောင့်ကြည့်။ လေ့လာသူ OTT devices များနှင့်ကုဒ်ပြောင်းသည့်၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးကြောင့်လွယ်ကူစွာကွန်ပြူတာများမှစမတ်ဖုန်းရဲ့ Device ရဲ့အကွာအဝေးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစစ်ဆင်ရေး (က DVR များဆင်တူ) စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဝေးလံခေါင်သီအသုံးပြုမှုသက်သေနဲ့တူသောအရာတို့ကိုအပါအဝင် features တွေအမျိုးမျိုးခွင့်ပြုပါတယ်။
Blackmagic Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4K (Blackmagic) (ဆန်းသစ်တီထွင်-အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း)
အင်္ဂါရပ်တွေ, ကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်သူ, ကြီးမားတဲ့ applications များ၏ကြီးမားသောစာရင်း; အလွန်သေးငယ်သောကင်မရာ! အဆိုပါ Blackmagic Micro နဲ့စတူဒီယိုကင်မရာ 4: ပွင့်လင်းဒီဇိုင်း, အံ့သြဖွယ်ဘက်စုံ, ခက်ခဲတဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း core ကို, ထိုသို့မယ့်ယခုရရှိနိုင်ဖြစ်လာခဲ့သည်! အခြားစတူဒီယိုမနာလို Make - တဦးတည်းရယူရန်သင့်မွို့တှငျပထမဦးဆုံးဖြစ်!
လေစီးကြောင်း (Editshare) (ဆန်းသစ်တီထွင်-အကြောင်းအရာ Delivery)
အဆိုပါတွေရဲ့ privacy နဲ့လုံခြုံမှုကိုတဆငျ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာသင်၏ဖိုင်များကို access editshare မိုဃ်းတိမ်ကို။ လေစီးကြောင်း သငျသညျကိုဆင်းမိုဃ်းတိမ်ကနေသင်သွားလေရာရာ၌ရန်သင့်အကြောင်းအရာဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်လိုအပ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ သင်ကလိုအပ်ခဲ့လျှင်အစာရှောင်ခြင်းမိုဃ်းတိမ်ကနေတဆင့်ပေးပို့!
Nexidia ဆွေးနွေးပွဲရှာရန် v2 (Nexmedia) (ဆန်းသစ်တီထွင်-အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး)
အဆိုပါ Nexidia ဆွေးနွေးပွဲရှာရန် v2 လာမယ့်အဆင့်အထိသင့်ရဲ့ meta-data ကိုကြာပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ရှာဖွေခြင်းနှင့် filtering ကိုအတွက်အသံထှကျနှငျ့ intertwining ဖွငျ့ဤပါဘူး, အဲဒါကလည်းတစ်ခုတိုးချဲ့ user interface ကိုများနှင့်တစ်ဦးလည်းပါဝင်သည် လွန်စွာလိုလားသော ဆက်စပ်မှုတွေပေးခဲ့သည်ပံ့ပိုးမှု။ ဒီဖြေရှင်းချက်ကိုသင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်တဲ့အရသာကိုရယူပါ။ Nexidia ဆွေးနွေးပွဲရှာရန် v2 မျိုးစုံမီဒီယာစာကြည့်တိုက်၏အကူအညီနှင့်အတူမျှသာစက္ကန့်အတွင်းမဆိုပြောပြီစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုထွက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာဗဟိုပလက်ဖောင်း (လွန်စွာလိုလားသော) (Origins-အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း)
သငျသညျဂီတတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးသို့မဟုတ်သံကိုသက်ရောက်မှုတစ်ဦးစတူဒီယိုကိုဖွင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်စားသုံးသူအဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်ထိရောက်မှုလိုအပ်ပါတယ် တောင်းဆိုချက်များမပေါက်ပါဘူး။ ကြောင်းထိရောက်မှုလိုအပ်ချက်လောင်စာ (နှင့်အခြားသပ်သပ်ရပ်ရပ်ပစ္စည်းပစ္စယပြုပါ) အထွက်ကိုစစ်ဆေး လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာဗဟိုပလက်ဖောင်း။ အဆိုပါ လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာဗဟိုပလက်ဖောင်း decipher နှင့်အနက်ကိုဘော်ပြသင့်ရဲ့ဒေတာနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အမြင့်ဆုံးလုပ်ငန်းအသွားအလာထိုသို့ချောမွေ့စေရန်ပူးပေါင်းလွယ်ကူချောမွေ့ကူညီပေးသည်။
MFL Fiberbox Wideband Optical Link ကို (Wisycom) (Origins-အကြောင်းအရာ Delivery)
အဆိုပါ MFL Fiberbox Wideband Optical Link ကို ပင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဘဏ်ဍာများအတွက်မီဒီယာအကြောင်းအရာပေးပို့များအတွက်ဖြေရှင်းချက်အတော်လေးရိုးရှင်းစွာ, ပါ! တစ်ခုတည်းကမ်းနားလမ်းဖိုင်ဘာမှတဆင့် multiplexed လေး RF လမ်းကြောင်းဟာ Ethernet ကနေတဆင့်မတူနိုင်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဖိုက်ဘာကျော်ကဒီအ RF ကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်များအတွက်ပလက်ဖောင်းပေးပါသည်။ သစ်တစ်ခုမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ထည်ရရှိနိုင်ပါသည်သက်တမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်ရန်, အဆိုပါ MFL Fiberbox BX1-4U ပြင်ပတွင် RF-ကျော်-Fiber ဖြေရှင်းချက်။
X10 UHD RF (ကျနော်-Movix) (Origins-အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး)
ငါ-Movix ယင်းနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ပံ့ X10 UHD RF: ချောမွေ့စွာစူပါနှေး Motion များအတွက် 4K ထောက်ခံမှု 1,000 FPS အထိဘောင်နှုန်းထားများခွင့်ပြုက Ultra နှေး Motion (USM) မှတဆင့် SSM) ။ အဆိုပါ X10 UHD RF Vision ၏သုတေသနရဲ့ Phantom Flex10K ကင်မရာ X4 Ultra-ရွေ့လျားမှုနည်းပညာပေါင်းစပ်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အကြား switching တူသောအင်္ဂါရပ်များ HD နှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံလက်ငင်းနှင့်အတူ 4K အားကစားပရိသတ်တွေဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိစေပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ X10 UHD RF; အစာရှောင်ရာချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာနှင့်အတူစူပါအနှေးပြကွက်!
HDC 4300 (Sony ကတစ်နှစ်တာ-အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း) (ကုန်ပစ္စည်း)
Sony က ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမရှိလူစိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖြေစုံလင်သောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် HDC 4300 ။ နောက်ထပ်တစ်ခါ Sony က သုံး2/3လက်မအရွယ် 4K image sensor များအသုံးချသောကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးကင်မရာ: ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါ HDC 4300 လည်းငါတို့ပဲပေါ်စံအဖြစ်မျှော်လင့်လာပါတယ်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးမြင့် features တွေတစ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်ပါဝင်သည် Sony က ကင်မရာများ။ တစ်ဦးရင်းနှီးကျွမ်းဝင် configuration နဲ့အတူဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းနည်းပညာဟာ operatic ခွင့်ပြု သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချမှု, လွတ်လပ်မှုနှင့်ရိုက်ကူးရေးစဉ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။
Envivio မူဆယ်တိုက်ရိုက် (Envivio) (တစ်နှစ်တာ-အကြောင်းအရာ Delivery ၏ကုန်ပစ္စည်း)
သင်သည်အဘယ်သို့ရှာအံ့သောငှါထို့နောက်အရည်အသွေးကိုအကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဆိုရင် Envivio မူဆယ်တိုက်ရိုက် ကကယ်တင်တတ်၏! ထိပ်တန်းအရည်အသွေး SD က (သို့မဟုတ် 100 20 အထိ HD) ချန်နယ်များနှင့်ကအားလုံးကိုနေရာပဲ2ထိန်သိမ်းယူနစ်အတွက်ကိုက်ညီ! အဆိုပါ kicker ့အကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူခြင်းထက် ပို. ပြုလုပ်စီမံခန့်ခွဲမှုအမွှေးအ suite ကိုအဖြစ်ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားထားပြီးမပါ!
ရွှေ TS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (တံတား Technologies က) (တစ်နှစ်တာ-အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲရေး၏ကုန်ပစ္စည်း)
ကြောင်းဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အမှားရှာမရနိုင်မလား? စို့ ရွှေ TS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး သံချပ်ကာထွန်းလင်း၌သင်တို့၏ Knight စေသတည်း ဒါဟာစှာဟာစံကိုက်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရိုးရှင်းစွာနဲ့သင့်ရဲ့စတူဒီယို ETR290 စံချိန်စံညွှန်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်ခွင့်ပြု, တစ်ဦး bloodhound တူသောအမှားများထုတ် sniffs ။ အတူကျော်တစ်ဒါဇင်ကြိမ်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်အချိန်ကိုလျှော့ချ ရွှေ TS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး!
ထိုကြောင့်ငါ၏အဆွေတစ်ဦးမ့်မှုတွေကြုံတွေ့ရအတွက်, နေ့3ခဲ့ ... ငါမနက်ဖြန်ပြန်လာရန်သင့်အားပြောပြရန်ရှိသည်မထင်ကြဘူး - တနင်္လာနေ့ကပိုအံ့သြဖွယ်များနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအများကြီးပိုပြရန်ရှိလိမ့်မည်အဖွစျ! ယခုအသုံးပြုပုံသင် blogged-နေရပါမယ် ", ထိုသိမှာ" ဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သင့်ပါတယ်! အဆိုပါ flipside ပေါ်တွင်သင်အမီလိုက်!
2015 4K ACCESS CO Aspera ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ Contentwise Ericsson က Exterity GatesAir Genelec Genius ဒစ်ဂျစ်တယ် H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို ဆူညံသံလျော့ချခြင်း Piksel Snell အဆင့်မြင့်မီဒီယာ UHD / 4K / HD ကို UPnP ဖိုရမ် viarte ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် Vislink ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ Warsaw ကို 2015-09-13
ယခင်: IBC ပြရန်နေ့2အသုတ်စုံ! #IBCShow
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည် EditShare